Ny Andian-tsarin'ny ankizy mbola velona dia mahazo vidin'ny peabody ho fitantarana tsara indrindra | Avy amin'ny mac aho
A Fanombohan'ny volana Mey, ampahafantarinay anao ny momba ny fanendrena ireo loka Peabody izay azon'ny sasany amin'ireo andiana hita ao amin'ny Apple TV, indrindra ny hatsikana Ted lasso ary ny andiany ho an'ny ankizy Sillwater. Andro vitsivitsy lasa izay, Ted Lasso no nahazo ny loka sokajy izay nanendrena azy, fa, tsy io ihany no andiany.
Stillwater, ny andiany hafa izay nahazo loka Peabody ho an'ny Best Narrative, koa dia nahazo ny loka natokana ho azy, araka ny voalaza ny orinasa miorina amin'ny Cupertino. Ity andiany ity dia natolotry ny mamporisika ny fiaraha-miory amin'ny fitantaranao momba ny fianakavianao.
Amin'izao fotoana izao, ity no loka voalohany azon'ity andiany ankizy ity, hatramin'ny fanolorana loka Annie Award teo aloha, tsy dia tsara vintana izy fa eny Wolfwalkers. Ilay Serie Rano mihandrona dia miorina amin'ny andiany boky Scholastic "Zen Shorts" nataon'i Jon J. Muth ary mifantoka amin'i Karl Addy sy Michael, tanora roa izay mahazo toro-hevitra amin'ny ain'ny panda hendry izay mipetraka eo akaikin'ny trano.
Nanambara i Apple fa:
Amin'ny alàlan'ny ohatra nomeny, ny tantarany, ary ny vazivazy malefaka, i Stillwater dia manome ny ankizy fahatakarana lalindalina kokoa ny fihetsem-pony, ary koa fitaovana hanampiana azy ireo hiatrika ireo olana sedrain'izy ireo isan'andro.
Stillwater koa dia mitondra fahafinaretana sy fitsangatsanganana vaovao ho an'ireo telo, manokatra ny mason'izy ireo amin'ireo zava-mahatalanjona mangina eto an-tany manodidina azy ireo ary mitarika azy ireo amin'ny toerana misy azy ireo.
Ny Peabody Awards dia manaiky ny fandaharana izay mandrisika ny fiaraha-miory sy hanitatra ny fahalalan'ny mpihaino izay itodihana. Mandrak'izao, Apple TV + dia nahazo loka maherin'ny 350 ary loka efa ho 120 ho an'ny atiny rehetra fa androany dia misy amin'ny sehatra streaming-ny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny Andian-tsarin'ny ankizy mbola velona dia mahazo vidin'ny peabody ho an'ny fitantarana tsara indrindra
Efa afaka mahita ilay tranofiara amin'ny sarimihetsika Apple TV + "CODA" izahay